I-4 AS ikhuthazwe ukwakha kabusha ukuqina nokuncintisana kwe-Indonesia ngemuva kobhubhane lwe-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » I-4 AS ikhuthazwe ukwakha kabusha ukuqina nokuncintisana kwe-Indonesia ngemuva kobhubhane lwe-COVID-19
UMnyango Wezokuvakasha kanye Nomnotho Wokudala wase-Indonesia uzihlanganisa nokuthuthukiswa kokuqina nokuncintisana ukuze ukhuthaze ukuvuselelwa kwamabhizinisi ngemva kokushaywa ubhubhane lwe-COVID-19.
Ukuze kuzuzwe umgomo, uMnyango udale izinhlelo ezigxile kuzimiso ze-“4 AS”: okuyi-Kerja KerAS (ukusebenza kanzima), i-CerdAS (ukusebenza ngobuhlakani), i-TuntAS (ngokuphelele), kanye ne-IkhlaAS (abaqotho). Umnyango unethemba lokuthi i-4 AS izoba yizimiso ezibalulekile ezimbonini zezokuvakasha nezobuciko ukuze zakhe kabusha amabhizinisi azo futhi zivuselele umnotho wezwe.
Le migomo ye-“4 AS” yasungulwa kulandela umthelela wobhubhane lwe-COVID-19 kwezokuvakasha nezamabhizinisi okudala ezweni lonke, lapho ngaphambi kokuthi kubekwe imingcele yezenhlalo nezomnotho yokukala ukusabalala kwaleli gciwane, kwaba nabafika abavakashi abayizigidi eziyi-16.11 ngonyaka ka-2019 futhi yehla ngama-75. ngo-4.02 ashintshwe ku--2020 million.
Lesi sibalo sibe nomthelela ongemuhle emnothweni wezokuvakasha ohlinzeke ngo-5.7% wesamba somkhiqizo wasekhaya wezwe futhi sahlinzeka ngemisebenzi eyizigidi eziyi-12.6 ngo-2019.
“Sidinga ukushesha ukuze sithole ulwazi namakhono ahambisana namabhizinisi. Yingakho bonke ababambiqhaza kufanele bahlangane ukuze kuvulwe zonke imboni yezokuvakasha kanye neyokudala amathuba okudala amathuba emisebenzi kanye nokuqinisekisa ukuthi singakwazi ukwakha kabusha umnotho wethu ngokuvakasha okuseqophelweni eliphezulu nokusimeme,” kusho uSandiaga Uno, uNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nomnotho Wokudala.
Uhulumeni ubelokhu esebenza kulolu hlelo ngokusabalalisa izinxephezelo zokubuyisela ezimbonini zezokuvakasha nezobuciko. Kusukela engxenyeni yokuqala ka-2020, imboni yezokuvakasha e-Indonesia ilahlekelwe cishe ama-rupiah e-Indonesian ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-85 emalini engenayo yezokuvakasha, kanti imboni yamahhotela nezindawo zokudlela ilinganisela ukulahlekelwa cishe ngama-rupiah ase-Indonesia angama-70.
Ubhubhane lwe-COVID-19 luthinte kakhulu neminye imikhakha yezobuciko. Ngakho-ke, uMnyango usebenza ezinhlelweni ezahlukene zemfundo ukukhuthaza usomabhizinisi ezweni lonke.
Olunye lwalezi zinhlelo luyisinyathelo sabafundi bezikole okuhlalwa kuso ama-Islamic esibizwa nge-“Santri Digitalpreneur Indonesia” esigxile ekuqeqesheni nasekufundiseni “i-santri” (abafundi) ukuze bafunde amakhono edijithali futhi bayisebenzise njengenhloko-dolobha yabo ukuze babe i-digitpreneur noma basebenze kwezobuciko. imboni.
“I-Indonesia inezikole okuhlalwa kuzo zamaSulumane ezingu-31,385 futhi siyabakhuthaza bonke ukuthi bathuthukise umnotho wabo wokusungula ngokusebenzisa idijithali. Zonke lezi zinhlelo ziyingxenye yomzamo wethu wokuqhubekisela phambili ukukhula komnotho kazwelonke,” kwengeza uSandiaga.
UMnyango uphinde waqinisa ubudlelwano bawo nabo bonke ababambiqhaza ukuze kuthuthukiswe ukusimama kwebhizinisi okusekelwe “ku-3 C principals”, okuyi-Commitment, Competence, and Champion, ukuze kuvuselelwe umnotho wezokuvakasha nobuciko, ukwandisa ukufukulwa kwezomnotho, nokudala amathuba omsebenzi.
“Kumele siqhubeke ngokubambisana kuwo wonke amathuba akhona amabhizinisi ukuze sakhe amathuba emisebenzi amasha. Ngemibono emisha nehlakaniphile, singakha kabusha futhi sithuthukise umnotho wase-Indonesia,” kuphetha uSandiaga.